शङ्कर शर्मा7लेखहरु0comments
शङ्कर शर्मा	 २८ कार्तिक २०७८ ०९:०१ 0
बाबा शैलसमान हुन् जनक हुन् साक्षात् तिनी ईश्वर त्याग्छन् भोगविलास नित्य तिनले सन्तानका खातिर ब्रह्मा विष्णु महेश हुन् भुवनमा सन्मार्ग देखाउने आफ्ना चाहहरू भुलेर जगमा सन्तान हुर्काउने ।।१।। बाबा हुन् घरका अखण्ड बलिया खम्बा र भित्ता…
कविता – विवश जनता
शङ्कर शर्मा	 २४ आश्विन २०७८ ११:१८ 0
उषाको किरण पर्नुभन्दा अघि ढलपल ढलपल गरिरहेका ती शीतका थोपाझैँ ढलपल ढलपल भइरहेका छन् हाम्रो जातीय अस्तित्व र चिनारी जुनै जोगी आए पनि कानै चिरिएको भनेझैँ भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् वीर गोर्खे नेताहरूले हिउँदमा…
कविता : कुर्सीको गुनासो
शङ्कर शर्मा	 ६ असार २०७८ १७:०१ 0
" तँ ठूलो कि म ठूलो ?" एकदिन अचानक प्रश्न गऱ्यो मलाई एउटा जाबो कुर्सीले। "कुर्सी ठूलो कि म ठूलो ?" धेरैबेर यो प्रश्न मेरो मस्तिष्कमा घुमिरह्यो। पहिला त "जाबो कुर्सी" भन्ने विचार आयो । तर…
शङ्कर शर्मा	 ३० जेष्ठ २०७८ १५:०१ 0
केही वर्षअघि म एक दिन आफ्नो निजी कार्य लिएर जान भनी निस्केको थिएँ । दिसम्बरको महिना भएकाले अति नै जाडो थियो । बिहानैदेखि टम्म हुस्सु लागिरहेको थियो । म गाडीको प्रतीक्षामा गोरुबथानको मोटरस्ट्यान्डमा उभिरहेको थिएँ । करिब एक…
तपाईँ आउन साह्रै ढिला गर्नुभयो
शङ्कर शर्मा	 २३ जेष्ठ २०७८ १४:०१ 0
बल्लबल्ल उनले कोठामा सर-समान मिलाई सकिन् । किरायामा लिएको कोठामा उनी आजदेखि बस्न आएकी थिइन् । भर्खर सोलाहको वसन्तमा पाइला टेकेकी रिनाले एधार पढ्न भनी नोकडाँडा बस्तीबाट कालेम्पोङ आएकी थिइन्। अग्ली कद भएकी हेर्दा गहुँगोरी, दुब्ली पातली,…